Dhaqanka Corporate - Shanghai SOG Bamka Co., Ltd
SOG C orporate M yeelan aqlabiyadda gacan ha xubin SOG oo dhan ay ku noolaadaan nolol wanaagsan.
Ka dhig horumar joogto ah awoodaha iyo qiimaha shaqaalaha lix dhibcood, mustaqbalkiisa, koritaanka, Xoolo, qoyska, caafimaadka, jacaylka iyo xubin dedication.Let oo dhan SOG hesho farxad double labada qalab iyo arrin ruuxi ah.
SOG C orporate V ision: dhis a ixtiraamo ganacsi
★ joogto ah siiyaan "tayo sare leh, oolnimada sare, waxqabadka qiimaha sare" waxyaabaha bamka, Bixiyo adeegyo ka badan macaamiisha laga filayo iyo in la abuuro qiimaha ugu badan ee macaamiisha.
★ Noqo shirkadda ugu soo jiidashada badan ayaa indhaha ku shaqaalaha, oo waxaad ka samaysaa shaqaale heer sare ah iyo la-hawlgalayaasheeda noqday co-hawlgalayaasha.
★ Noqo "Shiinaha istaahila-aaminaad xal bamka ku takhasusay", ka qayb qaateen horumarka warshadaha bamka!
★ Waxaan nahay go'an in ay kor u qaadida dhaqanka Chinese iyo waxbarashada daryeelka dadweynaha, waxayna ku darsaday in xaqiijinta riyo Shiinaha!
SOG Core Qiimaha: Urursanaanta, hal-abuurnimo, aaminaad, ficil, PK
SOG Goolal Corporate: qorshaha shanta sano ugu horeysay ka 2017-2021
2018: Waxaa buuxiya dhismaha hay'adda waxbarashada
2019: Waxaa buuxiya collectivization ee SOG.
2020: mid la aasaasay hawlgalka kooxda oo aan ka yarayn 60 people.Train ka badan 20 "Ciidamada gaarka ah xirfadle" iyo 10 maareeyayaasha guud, tareenka ka badan 10 co-Wadaajiseen ah kuwaad dakhli sannadeedka ka badan 300,000 oo RMB, iyo dakhliga sanadlaha ah ee dhammaan xubnaha SOG ka badan 100,000 oo RMB.The baaxadda ganacsiga gaadho 100 milyan oo RMB.
2021: Total yeeshaan in ka badan 30-hawlgalayaasha istiraatiiji ah, caawin iyaga si ay u tababaraan 100 "xirfadlayaasha warshadaha". Total in ka badan 350,000 oo RMB loogu deeqi doonaa tallaabada daryeelka dadweynaha
Dadaala inaad buuxiso qeybinta geed isbonji la mid ah group SOG ku soo galay suuqa ka hor 2021.
Macaamiisha ugu horeysay, shaqaalaha,
Joogtaynta in hadalladiisa iyo falimihiisana
Marna ha ka iibsan mustaqbal waxtarka muddo gaaban
Daacad iyo sharaf ku nool